[Ngaphandle kweFest 2020] uphononongo: 'I-Archenemy' iGritty ithathe amaqhawe kunye nozuko lwangaphambili-iHorror
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo [Ngaphandle kweFest 2020] uphononongo: 'I-Archenemy' iGritty Thatha ii-Superheroes kunye nozuko lwangaphambili
Iindaba ezothusayo zoLonwaboUkoyikeka kwengqondo (ii-thrillers)
[Ngaphandle kweFest 2020] uphononongo: 'I-Archenemy' iGritty Thatha ii-Superheroes kunye nozuko lwangaphambili
by UJacob Davison Oktobha 17, 2020
ibhalwe ngu UJacob Davison Oktobha 17, 2020
Uhlobo lweqhawe eliphambili kule minyaka imbalwa idlulileyo iye yaba yitente ye cinema kunye nenkcubeko ye pop, ebhetele okanye embi. Ngokwenza njalo, kwii-franchise eziphambili ezinje Ababuyisi Sixhiba, Batman, Indoda yesigcawu njalo njalo, baphakamise uhlengahlengiso lwencwadi yamahlaya kwizigidi ngezigidi zeedola. Kodwa ke zininzi iindidi zamabali awawaxelelayo kwaye uninzi lunokubaliswa emhlabeni, endaweni yesibhakabhaka. Njengokuba kuya kwenzeka ntoni xa iqhawe liphulukana namandla alo? Benza ntoni ke? Oku kucwangciselwe Utshaba olunzima.
UMax Fist (uJoe Manganiello, Igazi lokwenyanilelona qhawe linamandla kwindalo iphela. Ubuncinane, wayenjalo. Ngoku, yindoda engenakhaya kwaye ikwanxila kwaye inokubakho kobuqhetseba kunye nengxaki yomsindo. Ukubetha iindonga zezitena kunye nokunqwenela ukukwazi ukubetha kwizakhiwo njengoko ebanga ukuba unako. Ungaphantsi kwesaziso kwisixeko esikhulu, ehlekisiwe ngumphathi wakhe kwaye waphathwa njengengxaki de adibane nomntu ozimisele ukummamela. IHamster (iSkylan Brooks, Iingqondo ezimnyama) yi-vlogger yendawo kunye nentatheli ekhangela i-scoop enkulu, kwaye ulibona ithuba lakhe noMax. Nangona enamathandabuzo malunga namabali amnandi kaMax Fist amaqhawe amakhulu kunye neArchenemy yakhe engathandekiyo evela kwindalo yakhe yasekhaya, ubuncinci baya kuyonwabisa. Kodwa uyakufuna uncedo lukaMax xa udadewabo u-Indigo (uZolee Griggs, BitUbanjiswa nguMphathi (Glenn Howerton, Kusoloko kunelanga ePhiladelphia) umntu okhohlakeleyo okhohlakeleyo ofuna i-Indigo ekubambeni kwakhe. Ngoku abantakwabo kufuneka badibane noMax Fist kwaye bafumanise ukuba ngaba amabali akhe amde ayinyani okanye uyisiphukuphuku. Okanye mhlawumbi zombini?
Utshaba olunzima Ivela kumbhali / kumlawuli uAdam Egypt Mortimer, osinike ingqondo ka-2019 kunye nomdlalo bhanyabhanya owoyikisayo UDaniel akanyani. Ngokufana neprojekthi yakhe yokugqibela, wenze into engathandekiyo ukuba ifakwe ebhokisini kuhlobo olunye okanye isitayile. Utshaba olunzima ngumdlalo bhanyabhanya wezenzo zolwaphulo-mthetho, into evuselelayo ngokwasengqondweni, ibhanyabhanya yomlinganiswa oqaqambileyo wajika entloko. Kwaye ayinakufika ngexesha elingcono. Ngelixa andizukutsho ukuba abantu bayagula ziimuvi ezinkulu zamaqhawe, kukho ukudinwa okubangelwa yimida yamabali abo. Kwaye oku kugqitha kubo. Inyaniso kunye nokulahlekiswa kukaMax Fist kugcinwa phezulu emoyeni, kukho imikhondo kunye nokujika okuya kwenza abaphulaphuli babuze ubunyani bamabango e-super suprem. Kodwa abayi kuthandabuza ukuba ungumatshini wokulwa.
UJoe Manganiello unika isihogo somsebenzi njengoMax. Khawufane ucinge u-Thor okanye uSuperman onomsindo ojamelene nokulahleka kwakhe kwesazisi, samandla. Nokuba uyaphambana, awunakukunceda kodwa uvelane naloo mfo, nokuba uyabetha kumdonga wezitena ukuze uve into kwaye unokubhabha ukakayi lomntu ngezandla zakhe. Kodwa kwakhona, inokubulela nje kuzo zonke iziyobisi kunye notywala kwinkqubo yakhe. USkylan Brooks kunye noZolee Griggs babonakala njengee 'sidekick' zakhe ezingaziwayo nangona benengqondo nengqondo ebhetele kunaleyo iya kuba liqhawe. UZolee njengo-Indigo ubonakalisa ubuqili obungenakuphikiswa kwaye uyakhathala, nokuba iimeko zichasene naye kwaye ubekwa kwiimeko ezinamandla ngemipu yokoqobo entlokweni yakhe. UHamster ngummeli obalaseleyo wabaphulaphuli kwaye unika inkxaso kwibali likaMax Fist. Ukunika umbono kwindalo iphela kwimfihlelo yakhe kunye nokunxibelelana kwakhe nehlabathi lemihla ngemihla. Kwaye uGlenn Howerton ubengezela ngokugcwala ngokupheleleyo njengoMphathi ongenakwenzeka. Ukongeza ezinye ii-quirks kwindawo enobungozi kakhulu kwaye kulula kakhulu ukuba nolwaphulo-mthetho.
Imiboniso yamanyathelo iyabetha nanini na xa iMax Fist iphuma yonke. Nokuba yimibhobho, imipu, okanye nje izandla zakhe ezibonakala ngathi azinakuqhekeka, uMax wenza inyama ecoliweyo nakubani na ngendlela yakhe. Ngokukodwa ukuba udakiwe. Kwaye ukudlulela kukaMax okudlulileyo kunye nokukhohlisayo kusingathwa ngobuchule ngothotho olunemibala egqamileyo kunye nolwe-surrealist yokulandelelana kwesitayile se-comic kunye ne-rotoscoping. Imvelaphi kaMax yincwadi ehlekisayo yesitayile sehlabathi, yiyo loo nto kusengqiqweni ukuba zinikwe kakhulu. Ikwawenza umahluko onomdla phakathi kwezinto ze-sci-fi kunye nenyani ethulisiweyo kunye ne-drab uMax uzifumanisa ebambeke ngaphakathi. Iiplatform ziyaphambuka zijike zihlangane, zinqumleza ngendlela entle elungeleleneyo nangona amanye amaxesha erhuqa kancinci.
Ndibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ndinamava Utshaba olunzima Ngaphandle kweFest 2020 kwi-Mission Tiki drive-in kwaye yayiqhuma kwiscreen esikhulu. Kananjalo, i-cast kunye neqela labasebenzi kubandakanya u-Adam Egypt Mortimer kunye noJoe Manganiello (Ngenja yakhe, i-Bubbles!), ISkylan Brooks, uZolee Griggs kunye nabanye kubandakanya abavelisi beSpectrevision babekhona kwimoto yeLegion M yeefoto-ops kunye ne-intros.
Ityala lemifanekiso uLisa O'Connor: UMlawuli / Umbhali uAdam Egypt Mortimer, uJoe Manganiello, uBubbles inja kunye no-Elijah Wood
Utshaba olunzima yayiyinto eyonwabisayo njengoko yayikrazula intliziyo kwaye ihlaba ngenqindi. Nangona abantu bengakalazi igama elithi "Max Fist", banethemba lokuba baya kutyala imali njengoHamster.
Utshaba olunzima imiselwe ukuba ikhutshwe ngoDisemba 11, 2020.
2020inyatheloI-adam egypt ibulalaUtshaba olunzimaNgaphandle kweFestUGlenn HowertoninyumnyeziUJoe ManganielloReviewInzululwazi-fiUmbono weSpectre
UJacob Davison ngumbhali osoyikisayo waseLos Angeles, u-Eye On Horror obambisene naye, kunye nomthandi wazo zonke izinto zohlobo. Uqokelela phantse iifilimu ezininzi njengoko ebukele.
IHorror Umnyhadala weFilimu 2020: Jonga uLuhlu olupheleleyo lwaBaphumeleleyo!
'I-GI Joe: i-Operation Blackout' yiMishini esileleyo